Ampidiro ny Instagram tsy misy kaody fanamarinana ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Janoary 28, 2019 0 fanehoan-kevitra 11890
Ny kaody fanamarinana dia mety ho aretin'andoha anao. Hatramin'izay dia mahaliana fa misy olana ity miely any amin'ny fangatahana samihafa. Ary dia io ilay tambajotra sosialy malaza Instagram, manana ity karazana olana ity izay nisy fiantraikany amin'ny mpampiasa maro, izay mahita ny fomba fanakanana ny kaontiny nefa tsy afaka manao na inona na inona. Nefa tsara misy fomba tsotra roa Mba hamaha ny toe-javatra misy anao. Ny voalohany dia ny miditra Instagram tsy misy fanamarinana ary ny faharoa dia ny fanerena ny fahatongavan'ny kaody. Amin'ny tranga roa dia mitovy ny vokatra. Zava-dehibe ihany koa anefa ny hoe mahalala an'izany Tsy ratsy avokoa ireo kaody fanamarinana.
Inona ny kaody fanamarinana?
Ny kaody fanamarinana dia paikady fiarovana izay mampiasa mailaka sy sehatra media sosialy, amin'ny alàlan'ny SMS for ampifandraiso amin'ny nomeraon-telefaonanao ny kaontinao. Amin'izany fomba izany, raha misy olona te-hiditra amin'ny kaontinao, ankoatry ny fananana ny tenimiafinao (raha toa ka nahazo izany ianao) dia mila manana telefaona an-telefaona ianao, fa raha tsy izany dia tsy afaka miditra aminy ianao. Fa indraindray dia ireo ihany kaody fanamarinana, nanjary nanelingelina azy ireo ny fanananao Instagram na tambajotra sosialy hafa.
Fa maninona no misy olana amin'ireo kaody fanamarinana ao amin'ny Insagram?
Ny antony hitrangan'izany dia mety noho ny an'ny olona iray fiarovana ny sehatra an'ny Instagram. Indraindray dia mifanerasera amin'ny mailaka miaraka amin'ny a kaonty misy na mamerina an-tsoratra ny fampahalalana nataonao. Ary koa, ny olana dia mety hiteraka ny tenanao, hampiditra diso fomba nomeraon-telefaona anao. Avy eo, ianao dia mitady fomba hidirana amin'ny Instagram tsy misy kaody fanamarinana. Amin'ireo tranga roa ireo dia mitovy avokoa ny vahaolana.
Mety ho fantatrao izany, fa manome tombony amin'ny fanamafisana ny mailaka ny Instagram rehefa mampiahiahy ny hetsika ary mandefa fotoana hafa kaody fanamarinana Mety tsy ho tonga izy ireo. Raha hamaha ity olana ity dia araho ireo torohevitra ireo.
Hamarino fa marina ny isa nampidirinao, raha toa ka, alao antoka fa mavitrika izy ireo mba ahafahanao mahazo ny kaody fanamarinana. Raha tsy mandeha izany, andramo isa iray hafa azonao Noho izany, tsy maintsy manova ny isa anananao ao ianao Kaonty Instagram. Tsara ny misokatra amin'ny kaontinao telefaona sy PC ho an'ity dingana ity.
Hamarino ny lisitry ny spam SMS, mety hoe eo ilay code. Raha tsy izany dia manandrama mampiasa ny kaody sery nahazo izany rehefa Mamorona ny kaonty Instagram aho, izay ho hitanao ao amin'ny konfigurasio. Raha miasa ho anao ity dia azonao atao miditra Instagram Tsy misy kaody fanamarinana.
Tapaho ny fitaovana ary manova ny toerana misy anao. Ny olana mety ho io dia izao fanarenana ny famantarana.
Raha tsy nisy miasa ny voalaza etsy ambony dia andramo mampahafantatra ny Instagram avy amin'ny foibe fanampiana, ka afaka manome anao vahaolana izy ireo.
Fa raha te hanamboatra an'izany ianao amin'ny alàlan'ny tenanao Avy eo, andramo ity safidy manaraka ity.
Dingana hahazoana ny kaody fanamarinana
Amin'ity tranga ity dia mila mampiasa pejy web ianao hahazoana ny hafatra SMS, antso Raiso ny SMS an-tserasera. Izay, feno tanteraka maimaimpoana ary tsy mitaky fisoratana anarana. Raha miditra amin'ny Instagram tsy misy code verification dia tsy vahaolana. Hanampy anao ity dingana ity, manaraka ireo dingana ireo.
Ny zavatra voalohany dia ny miditra amin'ny tranonkala Raiso ny SMS an-tserasera. Raha vao ao anatiny dia hahita ny lisitry ny isa avy any amin'ny firenena samihafa ary avy eo, ny hafatra voaray tamin'ny ora 24 farany. Ankehitriny, tsindrio ny telefaona finday misy hafatra maro kokoa. Ny tambajotra dia hanoro hevitra anao hisafidy ny isa izay misy hafatra vitsy kokoa, saingy niara-niasa tamin'ireo nanana izany bebe kokoa. Raha tsy mandeha aminao io, andramo laharana an-telefaona hafa, satria afaka mamo izy mandrapaha-tsy manavao ny pejy.
Rehefa avy nifidy ianao dia mandehana any amin'ny pejy fandraisana fandraisana hafatra, eo amin'ny farany ambony dia ahitanao ny nomeraon-telefaona. Adikao izany ao anatin'izany ny famantarana "+"Rehefa vitanao izany, dia apetaho eo amin'ny varavarankely izay mampiseho anao izy Instagram ary tsindrio "Alefaso".
Rehefa nalefa ny laharana finday dia hanohy ny Intagram alefaso aminao ny kaody fanamarinana. Tsy maintsy miverina amin'ny pejy fandraisana ny hafatra ianao ary manavao.
Adikao ny kaody
Miaraka amin'ny pejy nohavaozina hitanao eo amin'ny latabatra ao ambany. ny hafatra farany voarainy. Ny zavatra manaraka ataonao dia ny mandika ny kaody fanamarinana izay nalefan'i Instagram ho anao, izay ho hitanao ao amin'ny tsanganana Message. Ny hafatra dia tokony ho voalohany. Toy izany koa, manamarina fa ny laharan'ny tsanganana Avy amin'ny isa manjary 69988.
Apetaho ny kaody
Mba hamaranana ny dingana dia apetaho ny kaody izay nadikan'ny tsipika teo aloha ianao, ao amin'ny pejy nanontanian'i Instagram azy. Rehefa vita, dia hanana ianao kaonty Instagram voamarina ary ho afaka hiditra izany ianao tsy misy olana.
Mety ho liana koa ianao tononkira tsara indrindra ho an'ny Instagram.
1 Inona ny kaody fanamarinana?
2 Fa maninona no misy olana amin'ireo kaody fanamarinana ao amin'ny Insagram?
3 Login amin'ny Instagram tsy misy kaody fanamarinana
4 Dingana hahazoana ny kaody fanamarinana
4.1 Hiditra In
4.4 Adikao ny kaody
4.5 Apetaho ny kaody
Ampidino ny tantaran'ny Instagram
Manamboara toerana ao amin'ny Instagram